Vaovao farany Lingua volana Desambra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao farany Lingua volana Desambra 2018
Voadika ny 28 Janoary 2019 8:07 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana Desambra 2018.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 554 isika, nahasarika mpitsidika 223.436 ary jeripejy miisa 272.526. Nahatratra 262.213 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 259.980 tao amin'ny Twitter.
Raha atambatra ny taona 2018 dia namoaka lahatsoratra 7.467 isika, nahasarika mpitsidika 3.290.645 ary jeripejy miisa 4.029.809 , miaraka amin'ny tahan-dahatsoratra 622 isam-bolana eo ho eo, nahasarika mpitsidika 274.220 sy jeripejy miisa 335.817 eo ho eo isam-bolana.
Nambaranay ny fitadiavana mpandika teny sy toniandahatsoratra amin'ny teny Tseky sy Shinoa .
Efa nivoaka ankehitriny ny vaovao avy amin'ny voka-pifidianana nataon'ny Vaomieram-piarahamonina sy ny fehin-kevitra avy amin'izany.
Nambaranay ny fangalana Tonia Mpanatanteraka vaovao .
Nitombo 20% ny zotra amin'ny Lingua Shinoa nentim-paharazana, noho ny fandikan-tenin'ny lahatsoratra ‘Raha nomen'i Shina fahazoan-dalana ara-dalàna ny toby fanarenana indray amin'ny fanabeazana ao Xinjiang dia nanohana izany ny mpisera Weibo‘ nataon'i Rebecca Yen.
German Lingua also increased 20% in traffic, thanks to the translation of Beatles Memorial Day Marks the Anniversary of the Iconic Band’s First Visit to Japan by Colette Magalowski.
Ny Lingua Alemà ihany koa dia nitombo 20% tamin'ny zotra, noho ny fandikan-tenin'ny lahatsoratra ‘Andro Fahatsiarovana ny Tarika Beatles, Manamarika ny Fitsidihana Voalohany Nataony Tany Japàna’ nataon'i Colette Magalowski .
Shinoa Nentim-paharazana 18.707
Arabo ar 126.971
Espaniola es 19.633
Frantsay fr 17.477
Amharika am 8.887
Arabo ar 42.568
Bangla bn 7.956
Espaniola es 7.529
Frantsay fr 5.542
Misaotra anareo ry Lingua tamin'ny asa goavana sy mahatalanjona! 🙂
Aza adinoina ny manaraka ny Lingua ao amin'ny Twitter sy Facebook! Zarao amin'ny namanao sy ny tambajotra azafady ny taratasy fangatahana hanatevin-daharana ny Lingua. Mandika teny amin'ny teny ampolony maro izahay! Farany, misorata anarana ao amin'ny vaovaonay mikasika ny Lingua!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 ora izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 ora izay